Darpan Nepal – मोदीले जनकपुरमा लगाएको पोसाक ‘ओलीकाे उपहार’
May 12, 2018adminNews Paper0Like
काठमाडौं । जनकपुरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले लगाएको पोसाक मिल्नुमा संयोग थियोे कि आकस्मिकता ? शुक्रबार दिनभर ओलीको पोसाकको आलोचना भयो, तर कुरा बेग्लै थियो।एमाले नेता राजन भट्टराईका अनुसार मोदीले लगाएको पोसाक ओलीले पठाइदिएका थिए । हातले बुनेका दुवै नेताका मैथिली पोसाक काठमाडौंमै सिलाइएका थिए । भारतीय दूतावासले मोदीको शरीरको नाप उपलब्ध गराएको थियो । यस्तो प्रचलन अन्त पनि छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले गुजरात जाँदा लगाएको पोसाक मोदीको उपहार थियो।
झन्डै १५ सय अर्ब बजेट भएको देशमा एक अर्ब ‘कनिका सहयोग’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रदेश नं. २ सरकारलाई एक अर्ब सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । १२ बिघा मैदानमा प्रदेश सरकारको तर्पmबाट नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। नेपालको वार्षिक बजेट नै १५ सय अर्बको छ। शक्तिशाली छिमेकीको एक अर्ब सहयोगको घोषणा कनिकाजस्तो देखिएको छ ।
जनकपुरधाममा मोदीका चार घन्टा
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी विशेष विमानमा शुक्रबार बिहान १०ः३५ मा जनकपुर विमानस्थलमा अवतरण भए । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले स्वागत गरे । भारतबाटै ल्याइएको बुलेटप्रुफ गाडीमा उनी विमानस्थलबाट ४ किलोमिटर दूरीको जानकी मन्दिर पुगे जहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वागतका लागि तयार थिए ।जानकी मन्दिरमा मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ, मुख्यमन्त्री र जनकपुर उपमहानगरपालिका मेयर लालकिशोर साहले स्वागत गरे । जानकी मन्दिरमा मोदीले करिब ३० मिनेट विशेष पूजा गरे। पूजापाठपछि जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दासले मोदीलाई प्रतिमा प्रदान गरे । प्रधानमन्त्रीद्वयले रामायण सर्किट उद्घाटन पनि गरे । त्यसपछि दुवै प्रधानमन्त्रीले जनकपुर–अयोध्या बस उद्घाटन गरे ।
बाह्रबिघामा मोदीलाई अभिनन्दनको तयारी सुरु भयो । प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौं फर्किए । मोदीलाई जनकपुर उपमहानगरपालिका मेयर साहले मैथिली भाषामा तयार पारिएको नागरिक अभिनन्दन पत्र पढेर सम्बोधन गरे । जनकपुरको साँचो पनि मोदीलाई बुझाए।त्यसपछि रक्षामन्त्री पौडेलले स्वागत मन्तव्य राखे। मुख्यमन्त्रीको मन्तव्यपछि प्रदेश सरकार, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले मोदीलाई १२१ किलोको फुलको माला लगाइदिए । त्यसपछि मोदीले करिब ४५ मिनेट जनकपुर, मिथिला र नेपालको विषयमा हिन्दी, नेपाली र मैथिलीमा भाषण गरे। जनकपुरका लागि एक अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरे । जनकपुर ओर्लिएको चार घन्टापछि मोदी भारतीय सेनाको विमानबाटै दिउँसो २ः३० तिर काठमाडौंका लागि उडे।
विगतमा सम्झौता मात्रै भए, अब कार्यान्वयन पनि हुन्छ : ओली
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा जनकपुरको पौराणिक, ऐतिहासिक र धार्मिक भूमिका रहेको बताए । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइ दिने विश्वास गरे। जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब भारतसँग सम्झौता मात्रै होइन, कार्यान्वयन पनि हुने गरी काम गर्ने बताए। ‘विगतमा पनि मुलुकको हितका लागि भारतसँग विभिन्न सम्झौता भयो, तर काम भएन । अब हामी विलम्ब नगरी काम गर्छौँ, हामीसँग विलम्ब गर्ने समय छैन,’ ओलीले भने। उनले रामायण सर्किटले दुवै देशको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने पनि बताए। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
Previous Post‘भर्तीकेन्द्र’ बन्दै प्रदेश लोकसेवा आयोग Next Post​केश मुण्डन गर्ने महिला सेलिब्रेटी